Paragoay: Fahasarotana am-piterahana asehon’ny bilaogin-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, Português, English
Ny olom-pirenena ao Asuncion, renivohitr'i Paragoay, dia tsy mahatsiaro matetika ireo zaza vao teraka ho toy ny antom-pahafatesana iraisan'ireo vehivavy Paragoayana. Mbola tsy tafita tsara any amin'ny haino aman-jery be mpijery izany vaovao mitranga ao amin'ny firenena izany. Vokatr'izany, maro ireo Paragoayana no tsy mahalala ny fisian'ny taha -pahafatesan'ny zaza vao teraka avo sy ny fanalan-jaza ao amin'ny fireneny. Izany no mahatonga izay mijery ny Bilaogi-tsarin’ Rodrigo[es]mampiseho ny fahafatesan'ny zaza vao teraka ao Paragoay ho manafintohina sy mampihoro-koditra — eny fa na ho an'ny Paragoayana aza.
Tandremo fa mety hanelingelina ity sary manaraka ity.
Ny antontanisa ofisialy navoakan'ny CLADEM (Komity miaro ny zon'ny vehivavy ao Amerika Latina sy Karaiba [es] dia manamafy fa i Paragoay no voalohany amin'ny tahan'ny tanora betsaka bevohoka indrindra ao Amerika Latina, mitondra vohoka avokoa ny tanora 26 amin'ireo 1000. Ary ambony koa ny taha-pahafatesana: ny 25% ny vehivavy bevohoka maty eo am-piterahana dia latsaky ny 19 taona avokoa. Fa amin'ny maha-mpaka sary sy bilaogera an'i Rodrigo Alfaro, dia nanoratra toy izao izy [es], mety mbola ambony noho io ny isa marina, indrindra any ambanivohitra:
Nahazo ny fankatoavana avy amin'ny tompony ny fampiasaina ny sary sy ny maribolana amin'ity lahatsoratra ity. Misy amin'ny teny anglisy koa ny lahatsorany.